CDM ရထားကြီး ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ ? - Myanmar Pressphoto Agency
CDM ရထားကြီး ဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲ ?
Article CDM MPA Myanmar News
Article February 5, 2022 ·0Comment
By MPA (​တစ်နှစ်ပြည့် ဆောင်းပါး )
မြန်မာပြည်သူလူထုသည် ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက် အာဏာစတင်သိမ်းသည့်နေမှစတင်ကာ ယနေ့အချိန်ထိ နာကျည်းစရာ၊ ၀မ်းနည်းစရာများဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကာ စစ်အာဏာရှင်ကို ကြံ့ကြံ့ခံတော်လှန်နေဆဲဖြစ်သည်။
လူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံမှ သိန်းသန်းချီသော ပြည်သူများ အာဏာသိမ်းမှုကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသကဲ့သို့ပင် စစ်တပ်လက်အောက်တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအများအပြား၏ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement – CDM) မှာလည်း အရှိန်ရလာသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းသည့်နေ့တွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ ဆရာဝန်နှင့် ၀န်ထမ်းများက ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် Red Ribbon Movement ( RBM) ကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။​ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် (Civil Disobedience Movement – CDM) ဆရာဝန်နှင့် ၀န်ထမ်းများက ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ရှေ့တန်းမှ တိုက်ပွဲဝင်ကြသူများမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး ကပ်ဘေးကာလတွင် ရုတ်တရက် ပေါ်ပေါက်လာသော စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု ပေါ်ပေါက်လာရာ စစ်ကောင်စီ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ရပ်တန့်ရန်အတွက် အာဏာဖီဆန်သောလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement- CDM) အတွက် ဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဖမ်းများက ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။​
ဆေးပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ ပြန်ကြားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး စသည့် ဌာနများ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်းများအထိ ပါဝင်နေသည်။
နိုဘယ်ဆု အဆိုပြု ခံရတဲ့ CDM
စစ်အာဏာသိမ်းစစ် မှုကို ဆန့်ကျင်သော အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) ကို ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုအတွက် အော်စလိုတက္ကသိုလ်ရှိ ပါမောက္ခ ၆ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပြုလိုက်သည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရာတွင် အကြမ်းမဖက်သည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော CDM လှုပ်ရှားမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ခိုင်မာအားကောင်းရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်ရာတွင် အဓိကကျကြောင်းနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်မှုရရှိပါက နိုင်ငံအတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်နေသည့် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို ချုပ်ငြိမ်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပြုလွှာတွင် ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။
CDM သည်ပြည်သူလူထုအကြား ကြီးမားပြီးညီညွတ်ထင်ရှားသည့် ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့ကာ CDM ထောက်ခံသူများသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းအန္တရာယ်များရှိသည့်တိုင် လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ဘဲ သပိတ်မှောက်ခြင်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် အကြမ်းမဖက်ဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပြုလွှာ၌ ရေးသားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးနှင့် တစ်ဦးတည်းသော ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကို လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်ဘဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ၁၉၉၁ တွင် ရရှိခဲ့သည်။
“တပ်ကထွက်လို့ အပြင်မှာ သေချာတဲ့ အာမခံချက်တစ်ခုသာရမယ်ဆိုရင် တပ်တိုင်းနီးပါး CDM လုပ်နိုင်တယ်။ ” ဟု ဒီဇင်ဘာလမှ CDM လုပ်ထားသည့် ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် ၅၂ ကျောင်းဆင်း ကိုယ်ပိုင်အမှတ်နံပါတ် ကြည်း- ၅၅၇၂၅ ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းနှင့် မိသားစုသည် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် CDF – KKG ထံသို့ အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း CDF ထံတွင် လက်နက် အပြည့်အစုံဖြင့် CDM လုပ်ပြီး အလင်းဝင်လိုက်သူဖြစ်သည်။
စစ်ဗျူဟာအခြေချအဖွဲ့ မတူပီ – စစ်ရေးအရာရှိ တတိယတန်း စစ်ထောက်တာဝန် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ( လက်ရှိတွင် မုံရွာ၌ ကြားစခန်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသူ ) အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ လက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအပေါ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ၊ မတရားမှုများကို စက်ဆုပ်ရွံရှာပြီး CDM ပြုလုပ်လာသည့် ဗိုလ်ကြီး ကောင်းသူဝင်း နှင့် မိသားစုကို လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိသည့် နေရာဒေသသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်သလို ထိုက်သင့်သောဆုကြေးငွေကိုလည်း ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း CDF – KKG တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပြည်သူနှင့်အတူ ရပ်တည်ရန် လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် လာရောက်ပူးပေါင်းမည်ဆိုပါက တစ်ဦးလျှင်ကျပ် သိန်း၅၀ ပေမည့်အပြင် သွားလိုရာအရပ်ကို လုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ချင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CDF) က ဩဂုတ် ၁၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
“ ကျနော်အသက်ဆို ၃၂ နှစ်ရှိပြီ သက်တမ်းတစ်၀က်လောက်က တပ်ထဲမှာပဲ​ကုန်ဆုံးခဲ့တာ ဆိုတော့ ယခုက အပြင်မှာပဲ ပြည်သူ့ဘ၀ နဲ့ဘဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တော့တယ်”​ ဟု ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်းက ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းပြီး ခြောက်လကျော်အတွင်း အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) တွင် ပါဝင်လာသည့် တပ်မတော်သား ၂၅၀၀ ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း တပ်ကို စွန့်ခွာလိုသူများကို အကူအညီပေးနေသည့် ဗိုလ်ကြီးညီသုတက ပြီးခဲ့သည့် ပြည်သူ့ပန်းတိုင် စကားဝိုင်းတစ်ခုတွင် ပြောသွားခဲ့သည်။
တပ်ကို စွန့်ခွာလာသည့် တပ်မတော်သား ၂၅၀၀ ခန့်တွင် အများစုမှာ တပ်သားအဆင့်နှင့် တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ဖြစ်ပြီး ဒုဗိုလ်မှ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ထိ အရာရှိများလည်း ရာဂဏန်းမျှပါဝင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီသည် လုံခြုံရေးနှင့် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို အကြောင်းပြုကာ တပ်မတော်သားများနှင့် တပ်မိသားစုဝင်များကို တပ်ပြင်ပသို့ သွားလာခွင့်ကိုယနေ့ အချိန်ထိကန့်သတ်ထားသည်။
လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးတစ်နှစ်ပြည့်သည်အချိန်ထိ CDMပြုလုပ်သည် စစ်သားအရေအတွက်သည် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် တစ်ခုလုံး၏ တစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသေးကြောင်းကို တပ်မတော်သား CDM အရာရှိတစ်ဦးကဆိုသည်။​
အကြမ်းဖက်စစ်တပ် လက်အောက်တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအများအပြား၏ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement – CDM) တွင်ပါ၀င်နေသည့် မြန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး တစ်ချို့ မီးရထား ၀န်ထမ်းCDM များသည် စား၀တ်ရေးအခြေအနေကြောင့် Non_CDM များပြန်လည်ဖြစ်သွားကြသည်။
“ နေဖို့ကော စားဖို့ကောက ရေရှည်မှာ ထောက်ပံ့တဲ့သူမရှိတော့ တစ်ချို့ CDM ထွက်သွားကြတယ်။ ကျမတို့ကတော့ ကန်စွန်းခင်းရှိတယ် ထမင်းရှိရင် ဟင်းစားမပူရဘူး။ နေတာကတော့ ဖြစ်သလိုပဲပေါ့ “​ဟု CDM လုပ်ထားသည့် မီးရထား CDM တစ်ဦးက ပြောသည်။
အာဏာသိမ်းပြီးချိန် ၆ လကျော်အထိ မြန်မာ့မီးရထားဝန်ထမ်း၃၀၀၀ ခန့် CDM လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲများ၊​ စစ်ကောင်စီ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် CDM ပယ်ဖျက်သွားသူ ၅၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း မီးရထား CDM ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။​
အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement – CDM) တွင်ပါ၀င်နေသည့် အလွှာပေါင်းစုံမှ CDM ဝန်ထမ်းများကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH၊ NUG အစိုးရနှင့် သီးခြား ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များကကူညီထောက်ပံ့မှုများရှိနေသော်လည်း ထောက်ပံ့မှုမရရှိသည့် CDM ၀န်းထမ်းများ လည်းရှိသည်။
အာဏာသိမ်းပြီးချိန် ၆ လကျော်အထိ CDM ၀န်ထမ်းများမှာ ကြံ့ကြံ့ခံ တော်လှန်ကြသော်လည်း ရေရှည်အတွက် NUG အစိုးရမှ CDM များရပ်တည်နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းများနှင့် ပေါ်လစီများချမှတ်ထားဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို CDM ၀န်ထမ်းများက ဆိုပါသည်။
“ စားရေးသောက်ရေး၊ နေရေး အတွက် အခက်အခဲရှိတယ် ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူး တစ်နိုင်ငံလုံးခက်ခဲနေတာပဲ တော်လှန်ရေးအောင်တဲ့အထိတော့ တောင့်ခံရမှာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ငတ်တော့မသေနိုင်ပါဘူး “​ ဟု ပညာရေး CDM ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
#MPA #CDM #Myanmar #နွေဦးတော်လှန်ရေး
ပုံစာ – ၂၀၂၁ ၊​မတ်လတွင် မန္တလေးမြို့ ရှိ မီးရထားလိုင်းခန်းနေသူများ CDM လုပ်သဖြင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ နေအိမ်လိုင်းခန်းမှ ထွက်ခွာနေစဉ် / Photo – MPA
ယုံကြည်ချက်ကို အသက်နှင့်ရင်း၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူ ထင်လင်း
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း စီးပွားရေးကျပ်တည်းကာ သားဖွား၊ မီးယပ် ဆေးကုသမှု ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်
စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာမက နောက်ပြန်ဆွဲခေါ်သွားခြင်းကို ခံလိုက်ရသည့် သတင်းမီဒီယာများ
ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကို မေလ ၂ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်
ရန်လိုသော အင်အားစုများက ခြိမ်းခြောက်လာလျှင် နျူကလီးယားလက်နက် ကြိုသုံးမည်ဟု ကင်ဂျုံအန်သတိပေး
အိုင်စီဂျေ(ICJ)အမီ ပြန်လည်ရှေ့ထွက်လာသည့် အာဆာ